Inhlanzi ye-carp: izici nezinhlobo ezahlukahlukene | Okwezinhlanzi
UCarlos Garrido | | I-aquarium yasemanzini angenasawoti, I-aquarium yamanzi abandayo
Uma kukhulunywa ngokuthola intshisekelo yokuthola izinhlobonhlobo zezinhlanzi ezizofakwa e-aquarium yethu, ububanzi obukhulu bezinhlobo buvuleka phambi kwethu, osayizi bayo, imibala, njll. Abahlukile ngokweqiniso. Kodwa-ke, phakathi kwalokhu kwehlukahluka okunothile, kukhona inhlanzi eyodwa evelele ngaphezu kwezinye ngenxa yezimpawu ezenze zathandwa. Sikhuluma ngamaTende, enye ye izinhlanzi zamanzi abandayo ejwayelekile kakhulu
1 Izici ze-Carp fish
2 Izinhlanzi zeKois
3 Ungayinakekela kanjani iKois noma iCarp yethu?
4 Izinhlobo nezinhlobo zezinhlanzi zeCarp
Izici ze-Carp fish
I-Common Carp (i-Cyprinus carpio) ivela emazweni aseYurophu nase-Asia. Ingenye yezinhlanzi zasemanzini angenasawoti ukumelana ngokwengeziwe nokujwayela kangcono indawo ohlala kuyoKungakho ikwazile ukunqoba cishe wonke amagumbi eplanethi futhi ithole "ilungelo" lokungena ohlwini lwezinhlobo eziyikhulu eziyingozi kakhulu zomhlaba ezihlasela umhlaba ngokusho kwe-International Union for Conservation of Nature.
Imvamisa, izibonelo zabantu abadala zifinyelela kubude obuhlukahluka phakathi kwe- Amasentimitha angama-60 no-90, nesisindo esiseduze 9 amakhilogremu.
Uyazi inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani itende elikhulu? Kulinganiselwa ukuthi ezinye izibonelo, uma zijabulela izimo ezithile ngesikhathi sempilo yazo, zingafinyelela kumamitha ayi-1.2 futhi zibe nesisindo esingama-40 kg, futhi zeqe iminyaka engama-60 ubudala, cishe zingabi nalutho! Bazophila nasemanzini amile futhi angenamanzi amancane uma nje lawa esezingeni lokushisa eliphakathi kuka-17 no-24 ºC.
Ngokuyinhloko omnivorous, kanye nokudla kwayo kuqukethe izitshalo zasemanzini, izinambuzane, ama-crustaceans amancane, njll. Isikhathi sokuzalela siqala entwasahlobo, futhi senzeka emanzini angajulile, aminyene.
Abesifazane bathola ukubeka phansi Amaqanda e-300.000 okuthi, ngokuya ngamazinga okushisa kwamanzi, ikwazi ukuqhamuka ngemuva kwezinsuku eziyi-3-4.
Bobabili abesilisa nabesifazane bafinyelela ekuvuthweni ngokocansi beneminyaka engu-4 ubudala. Yize, i-priori, ingenayo imibala ekhangayo kakhulu, eChina futhi, ikakhulukazi eJapan, bakwazile ngokuzala ngokuthunjwa ukuze kuphume uhlobo olusha noma uhlobo lwemibala ekhanyayo negqamile, emincane ngosayizi, eyaziwa njenge koi.
AmaKooi, ngokungafani nezinye izinhlobo zodade impumelelo yawo eye yaqhamuka emkhakheni wokuzingela nokudoba, sesithandwa njengezilwane ezifuywayo. Njengokulangazelela, i-Koi ngesiJapane isho ukuthi "uthando" noma "uthando", futhi ukuzalaniswa kwalezi zilwane kwakhula kakhulu ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, lapho amachibi aseJapan koi lapho ukhaphethi omibalabala aletha khona ubuhle waduma kakhulu. . Kakhulu kangako, ukuthi lamachibi asabalalele emazweni ahlukahlukene ngaphandle kwendawo yase-Asia, ngisho nesibalo se- umfuyi we-carp ochwepheshe.
Ungayinakekela kanjani iKois noma iCarp yethu?
Njengoba kushiwo ngenhla, amaKois abe izinhlanzi ezifuywayo ezihamba phambili. Kakhulu, ukuthi kunconywe kakhulu kubo bonke labo abaqala kulo msebenzi wokuzilibazisa omuhle futhi abafuna ukuzama uhlobo oludinga ukunakekelwa okuncane, lushaya ngokubukeka nangombala, futhi lokho kuyisiqinisekiso sempumelelo kuma-aquariums abo namachibi.
I-Carp fish noma i-Kois inesibikezelo se- izingxenye eziphakathi noma ezingezansi kusuka lapho zikhona, njalo zikhuphukela phezulu ukuze zondle. Zingahlala ngamaqembu amancane, kuze kufike ku- Abantu abangu-6-7. Vele, kufanele kuqashelwe ukuthi kwesinye isikhathi bangakhombisa uhlamvu olunodlame, ikakhulukazi ngezinhlobo ezincane. Lesi simo sigcizelelwa kulawo ma-aquariums amancane futhi anabantu abaningi, lapho kulula khona ukubona ukuthi lezi zinhlanzi zisebenza kanjani unenkinga yolaka. Ngakho-ke, akukhuthazwa ukuwafaka emathangini amancane ezinhlanzi, njengalawo ajwayelekile ayindilinga, noma kulawo ma-aquariums lapho ahlangana khona nenani elikhulu lama-specimens. Lokhu kuzokwenza nentuthuko yakho ibe ngcono kakhulu. Isikhala sibalulekile kulezi zinhlanzi, ngakho-ke kunconywa ama-aquariums alingana noma angaphezu kwamalitha angama-90 amanzi.
Ukushisa kwamanzi akufanele kube yinkinga enkulu, ngoba sesivele siqaphele ukuthi lezi zilwane zizivumelanisa kahle nezimo zezulu. Yize, unikezwe ukukhetha, la matende amancane babekezelela amakhaza kangcono, inqobo nje uma ilinganiselwe, kunokushisa, ngoba amazinga aphezulu okushisa angaholela ekushodeni komoya-mpilo emanzini, ngokunengqondo, okungaba yingozi kubaqashi bawo. Kube nezimo emadanyini lapho lezi zilwane ezincane zikhuthazelele khona ngisho isithwathwa.
Kuzoba yiProfessional Food...
I-Sera - Umbala we-Koi Nature,...
I-Sera - Qedela Ukudla ...
Ngokuqondene nokudla, sekuvele kuthiwe zingama-omnivores (eduze nezidla inyama), ngakho-ke ungasile. Ngefayela le- okuphakelayo okumise okwe-flake esikuthola kunoma yikuphi ukusungulwa ezikhethekile ezilwaneni, kwanele. Kepha uma sifuna ukuthi bajabulele ukudla okunothile futhi okuhlukahlukene, singabanikeza okunye phila ukudla okufana nezibungu ezincane zezinambuzane ezisetshenziselwa ukudoba. Ngaphezu kwalokho, okunye ukwesekwa kwemifino akukaze kulimaze, noma kunikeze imifino yemvelo, lapho sizobheka khona ukuthi bona ngokwabo bathatha kanjani ukulunywa okuncane. Kufanele wazi ukuthi ebusika, i-Kois ne-carp encane iya kwinqubo ye- ukukhathala, lapho umsebenzi wawo wehliswe kakhulu, okusho ukwehla kokugaya umzimba, futhi ngenxa yalokho, ekulangazeleleni kwesilwane. Uma sibona ukuthi lapho emondla, akakudli lokho kudla noma ukukwenza ngamanani amancane kakhulu, akukhuthazwa ukuthi ugcizelele, ungakhathazeki kakhulu, ngoba ukudla ngokweqile kungaholela emiphumeleni ebulalayo.
I-JBL CRISTALPROFI e902 ...
Olunye udaba olubaluleke kakhulu ukuhlunga amanzi. Ukuhlunga okwenziwe emanzini ethu noma echibini kufanele kwenziwe ngendlela ngaphandle. Uma izinhlanzi zethu zise-aquarium encane ngaphandle kwesihlungi, kufanele senze ushintsho lwamanzi kaningi, ngoba lolu hlobo lukhiqiza inqwaba yemfucuza eyehlisa kakhulu ikhwalithi yomoya-mpilo ogcinwe emanzini. Sincoma ukuthi ubheje kusihlungi sangaphandle njengalezi.
Izinhlobo nezinhlobo zezinhlanzi zeCarp
Emakethe sinikezwa izinhlobo eziningi zezinhlanzi ze-carp ze-aquarium yethu. Yize kuyizinhlobo ezifanayo, ziningi izinhlobo zezinhlanzi Itende lapho imibala nobubumba kuvame ukwehluka kakhulu khona. Waziwa ngo "I-American Comet" Yinhlobonhlobo esabalele kakhulu ngoba idinga ukunakekelwa okuncane. Amaphiko azo awahlangene futhi nomzimba wawo mncane. Uyalandelwa "Ryukin" o "Umsila Weveyili", enamaphiko amade impela nomzimba omkhulu. Okufana kakhulu nalezi zakamuva yi- "Praying" kanye ne- "Inhloko yebhubesi", yize lezi zinhlobo zithwala isici se-cephalic papillae. Lezi ezintathu, njengoba sithi, zisakazeke kakhulu, kepha ezinye eziningi zobuhle obukhulu zingangezwa kubo.
Inganekwane yezinhlanzi zeKoi
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » I-aquarium yasemanzini angenasawoti » I-aquarium yamanzi abandayo » Carp
Amazwana ayi-19, shiya okwakho
U-Liz sifuentes kusho
Nginamatende amabili anjengewolintshi esithombeni sokuqala, kuphela awawolintshi, ayisiliva, inkinga ukuthi elinye lawo liphenduke laba bomvu angazi kungani, uma kuyisifo noma ukudla, elinye itende umbala ofanayo wesiliva
Phendula ku-Liz Sifuentes
Ngokuyinhloko, lolu hlobo lwe-carp, hhayi i-carp, banokufana okuningi, kodwa bahluke kakhulu komunye nomunye. Isibonelo, qaphela ukuthi i-carp ayinayo i-dandruff futhi ayinambala,. Ngakolunye uhlangothi, i-carpin yebo futhi nazo ziyizinhlobo zemibala ehlukahlukene futhi zinemisila emibili, ziyafana neChina. empeleni zikhuliswa ukuze zisetshenziswe ngabantu.
I-carp nayo, kepha yehlukile ... noma kunjalo ngizozama ukuphendula umbuzo wakho.
Kufanele ukhumbule ukuthi zonke izinhlanzi ezisekuthunjweni zidinga ukuba ne-oxygen eyanele emanzini, kuyadingeka ukuthi uzame ukufaka umoya emanzini ngamanzi (ngamadivayisi).
Kwesinye isikhathi futhi kungaba ukudla okungaphelele.
Amanzi ompompi amabi ngenxa yokweqisa kwawo i-lime ne-chlorine.
Ukusikisela: shintsha ichibi uzame ukushintsha ukudla, ngikweluleka nokuthi uthintane nochwepheshe hhayi umuntu othi uyazi.
IMOTO EJWAYELEKILE NGESINYE SEZILWANE KUNGENZEKA BAMBALWA ABANTU ABABE NETHUBA LOKUBONA KWESINYE ISIZE. NGIHAMBA UKUTHI YISILWANE ESIFIKAYO SIFIKELELE KUSayizi OBUNZIMA UKUKHOLWA
Annette alvarez kusho
Sawubona, ngiyi-watercolor enesihloko, ngiyakutshela ukuthi i-golfhis noma i-goldfish, noma ngabe ingumsila we-comet noma umsila ohlukanisiwe, yiziphambano zofuzo. Ungathenga isifanekiso esinezici ezithile nombala, ukuhlela ngokuhamba kwesikhathi kungashintsha ukwakheka kwemvelo nombala futhi kwazise umbala utholwe ngabazali bawo nokhokho babo. Kufana nokuthandaza ukuthi kube nokuguqulwa okuthile okwenza kube kukhulu kakhulu futhi kungaphazamisa umbono. Kulokhu, kufanele kwenziwe ukungenelela kokuhlinzwa bese kususwa okusele. Ngenze okumbalwa ngenkathi ngiphethwe i-anesthesia futhi ngikwenza etafuleni ngaphandle kwamanzi ngokuqapha okufanelekile. Kuzo zonke ngiphumelele ngokuphelele. Ngingathola futhi i-cyst engxenyeni ethile yomzimba ebucayi kakhulu ukuyisusa ngobungozi obuningi. Ngiyethemba ukuthi lokhu kubuyekezwa kuzokusebenzela. Ngivela e-Uruguay, noma yimiphi imibuzo enkonzweni yakho. Mayelana no-Annette
Phendula u-Annette Alvarez
Liz, ungakhohlwa ukuthi izinga lokushisa kwamanzi kufanele libe liphansi futhi ichibi libe likhulu futhi linezakhi ezihambelana nalo impilo yalo ende.
UHoracio Paez kusho
Ngindiza izinhlanzi zama-cyprinids, kunezinhlobonhlobo eziningi ze-carp ne-barbel, empilweni ejwayelekile futhi engakhuluphaliswanga ngokudoba i-carp i-carp ingafinyelela ku-30Kg. Zingu-47 kodwa sezivele zikhuluphele (ngenxa yamathumba). Ebusweni ungabona izithombe zami zezinhlobo ezithile ezinkulu. facebook com / flyfishingsevilla
Phendula uHoracio Paez
Liz: ngaphandle kokuhlazisa izimpendulo ezedlule kungahle kube nezizathu eziningana, angazi ukuthi izinhlanzi zakho zineminyaka emingaki kodwa uma zingaphansi kweminyaka emithathu ubudala kunokuthile okubaluleke kakhulu okufanele ukubhekelwe ngoba kuyinto ejwayelekile, zombili icala le-carp evamile noma i-koi Njenge-fishfish cishe kuzo zonke izinhlobo zayo kusukela ekuzalweni kuya ku-approx. ngokuhamba kwesikhathi iminyaka yayo emi-3 yokuphila, futhi kimi uqobo iningi livame ukuthatha imibala ebomvu noma esawolintshi ngokuphelele
Izibonelo ezi-3, ophuzi owodwa onama-aketas nomhlane omnyama, kugcina kuwolintshi ngokuphelele, iwolintshi elinamaphiko amnyama namuhla liwolintshi ngokuphelele, iwolintshi ngomugqa omnyama maphakathi nomzimba, namuhla cishe kumnyama konke ngaphandle kololintshi oluthile oluqinile iyaligcina ekhanda, ama-3 yi-carassius noma (i-goldfish) yezinhlobonhlobo ezivamile engiyithandayo
Sawubona ngine-1M D ESIDE X 0.40 CN D HIGH NO-030 D WIDTH FISHERY
NGINGAKWAZI UKUFAKA ICARP FISH UMAKHELWANE UNGINIKA KADE BENESIBUYO ESIPHELELE KANYE BAYADLA UKUDLA KWEKATI
Sawubona, ngisanda kwenza ichibi lama-2000 litres approx futhi ngathenga izinhlanzi ze-carp eziyi-6 kepha isonto engibe nazo bathuthele okuncane kakhulu, ngibanike ukudla kanye ngosuku ngokudla kwe-koy. Ngabe kujwayelekile yini ukuthi behlise umoya kangaka? njengeqiniso elengeziwe edolobheni lami iSantiago de Chile kuneziqu eziyi-14 ngosuku nezicishe zibe ngu-7 ebusuku, sisekwindla.
Ngivela edolobheni le-bahia blanc eningizimu ye-pvcia ye-bs, i-argentina ... umbuzo wami umayelana nokunikezwa kwe-carp ebusika, ngiyazi ukuthi emazweni afana neSpain bayabadoba ngamakhaza amakhulu, lapha ngizamile futhi Angikwazi ukuthola noma yini ... umbuzo wami ukuthi ngabe kukhona yini amathuba okukwazi ukuwadoba noma akunakwenzeka, ngiyabonga kakhulu
U-Ana Lilia kusho
Sawubona, nginenhlanzi efana nale ephuzi abathi iyi-koi yegolide futhi ngifuna ukwazi ukuthi ikhula kakhulu yini
Phendula ku-ana lilia
Zingaki zofuzo i-carp enazo kwi-chromosome 1?
Ngingathanda ukwazi ukuthi banazo yini izinhlanzi zohlobo lwe-carp zaseChile ezidayiswayo, leyo ekhona edamini laseChile
I-RAUL RAMOS kusho
Yini engenzeka uma ngiwafaka echibini lokubhukuda elingasasetshenziswa, linamanzi amile iminyaka emi-4, ngazama i-PH, futhi iphelele, bangitshela ukuthi ngibeke i-aerator, ngoba ayinaso isihlungi, ichibi cishe amalitha angama-5000, angaphansi kwengxenye yoGOBO.
Phendula ku-RAUL RAMOS
Sawubona, ngineziziba ezine-carp eningi, ngidinga ukulungisa echibini ngakho-ke kuzofanele ngizisuse, ngithanda izincomo zohlobo luni lwamachibi okufanele ngiluthole ngenkathi ngenza ukulungiswa kwechibi futhi isikhathi eside kangakanani isikhathi esinconyiwe.
UDavid bravo morales kusho
Sanibonani, ngifisa ukwazi ukuthi inhlanzi yami ye-koi ilimaza ezinye izinhlobo zezinhlanzi ngoba ukuthi enye inhlanzi yami ebhekene nengonyama iyafa futhi angazi ukuthi kungani.Ngiyabonga
Phendula uDavid Bravo Morales
Sawubona, izinhlanzi ze-carp zidinga umoya-mpilo
Sawubona, izinhlanzi ze-carp zidinga umoya-mpilo, izinhlanzi zami ziyabhukuda kakhulu futhi ngaphezulu ngifuna ukwazi ukuthi ngabe ziyayidinga yini ukuze ikwazi ukukusiza.
Zingaki izinhlobo zezinhlanzi ezikhona?
Inhlanzi ihlala isikhathi esingakanani?